Barnaamijyada – HIQ
NCA waxeey hadda ka shaqeyneysaa tiro mashaariic bilow ah.
1. Sahmin: heyaddu waxey hadda ku guda jirtaa bilaabidda olole sare oo lagu uruurrinnayo xogta shirkaddaha isgaarsiinta maamulla, kuwa adeegyada internetka bixiya, kuwa maamulla fogaal-aragyada/TV iyo fagaal-maqalyada/Radio iyo qadadka xiriir ee loo isticmaalo meelaha eey ka jirto xaaladdo Aaadminimo ee deg-degga ah, si loo diiwaan-geliyo shaxanka/spectrumka, mowjaddaha xiriirka hirarka, iyo nambareyntoodaba.
2.Xeerarka: heyaddu waxey hadda sameyneysaa xeerar qabyo-qoraal ah oo ku saabsan shuruucda waaxda xiriiirka/communications sector, nidaamyo iyo hanaan maamul. Xeerarka heyaddu eey ka shaqeyneyso waxaa ka mid ah; nambareynta, iyo isdhexgalkaba/interconnections.
3. Barta sarifka adeegga internetka: heyaddu waxey ka shaqeyneysaa iney sameyso marki ugu horeysay inuu dalku yeesho barta/xarunta sarifka adeegga internetka. Arrintan waxeey u ogollaaneysaa adeeg bixiyayaasha internetka iney si sahlan u sariftaan adeeggooda gudaha dalka ayagoon fariimahan u dirin meelo badan oo caalami ah oo eey marto xogta si eey u gaarto meeshi loogu tala-galay.
4. Dib u celinta/repatriationska dotSO/DhibicSO: heyaddu waxey dib-u-eegis ku sameyneysaa arrimaha farsamada, maamulka, iyo suuq-geyta ee domainka code-ka dalka ugu sareeya, si loogaga dhigo mid si deg-deg ah uga jawaabta baahiyaha macaamiisha gudaha iyo debedda.
5. Somalia CERT: heyaddu waxey sameyneysaa kooxda jawaabaha deg-degga ah ka bixisa umuuraha ku aadan kombuyuutarrada si eey u noqdaan kooxdi u horeysay ee si toos ah qaranku u yeesho arrimaha ku saabsan badqabka kombuyuutarrada. Sameyntooda waxey caawineysaa in la hubiyo kaabayasha xogta xaaladdaha qaranka, sidoo kale ineey caawiso qabyo-qoraalka siyaasadda iyo qorshaha qaranka uga dagsan arrimaha badqabka cyber security-ga.
6.Xeeyladda uguurridda dijitaalka: heyaddu waxey hormarin doonta xeyladda u guuridda dijitaalka iyadoo fulinteeda loo marayo habka wada-tashiga daneeyayaasha kuwaas oo ka kala iman donna dowladda, xeer-sameyayaasha, bahda warbaahinta, bixiyayaasha signallada, isu-tagga macaamiisha iyo iibiyeyaasha.
7. Nuuca ogolaashaha/type approval: heyaddu waxey masuuliyaddeedu tahay aqballaadda iyo ogolaashaha dhamaan khalabka isgaarsiinta kuwaas oo loogu tala-galay iney ku shaqeyaan shabakadaha isgaarsiinta dadweynaha ee wadanka. Sidoo kale waxey masuul ka tahay ogolaashaha khalabka xiriirka fogaal/maqallada kuwaas oo loogu tala-galay in wadanka lagu isticmaallo.